स्वास्थ्यका लागि तपाईंको थालमा कस्तो परिकार हुनुपर्छ ?
निशान न्युज भाद्र ६, 2076
काठमाडौँ । तपाईले खाने खाना जसले तपाईं निरोगी बनाउँछ । जब तपाईं जिब्रोको चक्करमा फस्नुहुन्छ, तपाईंको थालमा अस्वस्थ्यकर भोजन समावेश हुन्छ । जब तपाईं स्वास्थ्यप्रति सर्तक रहनुहुन्छ, तपाईंको थालमा स्वस्थ्यकर भोजन समावेश हुनेछ । त्यही भोजन हाम्रो लागि विष बन्छ र त्यही भोजन हाम्रो लागि अमृत बन्छ । कस्तो खानपान गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ ।
त्यसैले खाना खाइरहँदा आफ्ना थालमा त्यही परिकार समावेश गरौं, जो स्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य छ । आवश्यक छ । उपयुक्त छ । सुपाच्य छ । पोषणयुक्त छ । फलफूल र सागसब्जीलाई भोजनमा समावेश गर्ने
संभव भएसम्म अनेक रंग तथा अनेकथरीका फलफूल तथा सागसब्जीलाई खानामा समावेश गर्ने । थालीको आधा भाग यस्ता सागसब्जी र फलफूलले भर्ने । अर्थात आफ्नो खानामा फलफूल एवं सागसब्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । गहुँ, जौ, ब्राउन राइस होल ग्रेन अन्तर्गत पर्दछ । यसले व्लड सुगर तथा इन्सुलिनमा कम असर पार्छ । त्यसैले, यस्ता खानेकुराले थालको एक चौथाई भाग भर्नु पर्दछ ।
माछामासु, दाल तथा ओख्खर प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । यसलाई सलाद वा सागसब्जीको साथमा राम्ररी खान सकिन्छ । जबकी रातो मासु कम भन्दा कमी सेवन गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउन सक्छ भने बेकन तथा ससेजले समेत स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुदाँ यस्ता खानेकुरा सेवन गर्नबाट बच्नु पर्छ ।
जैतुन, ओलिभ आयल, सोयावीन, सन फ्लावर, बदामको तेल स्वस्थ तेल ९भेजिटेबल आयल० अन्तर्गत पर्दछ । यस्ता तेलका सेवनले शरीरमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसैले, तेलको खरीद गर्दा यस्ता स्वस्थकर भेजिटेबल आयल प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
हाइड्रोजेनेटिड तेलबाट टाढा रहनु पर्छ । किनकी यसमा अत्याधिक मात्रामा शरीरका लागि हानकारक मानिएको ट्रान्स फ्याट हुन्छ । याद राख्नुस्, कम वा शुन्य फ्याट हुँदैमा कुनै पनि खाद्य पदार्थ स्वस्थ कर हुँदैन ।
गुलियो खानेकुराबाट टाढा रहनु पर्छ । दूध तथा दूधजन्य पदार्थको सेवन दिनमा एकाध पटकमात्र गर्नु पर्छ । र दिनमा कम्तीमा सनो गिलासको एक गिलासमात्र फलफूलको रस पिउनु पर्छ । भोजन जस्तो सुकै गरे पनि त्यसलाई पचाउनका लागि सक्रिय रहन जरुरी छ । मानिस जति सक्रिय रहयो, उति नै धेरै स्वस्थ रहने गर्छ । त्यसैले, सक्रिय रहौ, स्वस्थ जीवन बाचौं ।
कुनै पनि खानेकुरा खाँदा उक्त खानेकुरामा कार्वोहाइड्रेटको मात्रा कति छ भनेर सोच्नु भन्दा हामीले गर्ने आहारमा कुन किसिमको कार्वोहाइड्रेटको सेवन बढी हुने गर्छ भनेर जान्न आवश्यक छ । किनकी तरकारीको राजा भनिने आलु, फलफूूल, साबुत अनाज, दाल लगायतमा पाइने कार्बोहाइड्रेट अन्य कार्बोहाइड्रेट खानेकुरा भन्दा धेरै स्वस्थ हुन्छ ।
स्वस्थकर भोजनको थालीमा गुलियो पेय पदार्थलाई वर्जित गरिएको छ । किनकी यस्ता पेय पदार्थमा पोषणको मात्रा कम हुन्छ भने ‘क्यालोरी’ को मात्रा उच्च हुन्छ । स्वस्थ भोजनका लागि तयार पारिने थालीले भेजिटेबल आयललाई प्रोत्साहित गर्छ । र, स्वस्थ स्रोतबाट तयार पारिएको यस्ता तेलमा रहेको फ्याटको उपभोगमा कुनै सिमा तोक्दैन ।
विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने मेडिकल कलेजको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । पटक–पटक सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै आएका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले एमबिबिएस र बिडिएसका व...
मेडिकल कलेज सञ्‍चालक भन्छन्ः विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको तोकेकोभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न नसकिने बताएक...
मिर्गौला फेल भयो कि ? लक्षण देखिँदैन
काठमाडौँ । नेपालमा बर्सेनि तीन हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको छ । खानपान र जीवनशैलीकै कारण मि...
यी हुन् मिर्गौला फेल हुनुका कारण
काठमाडौँ । मिर्गौलाको मुख्य काम रगतलाई फिल्टर गरेर टक्सिन अर्थात विषाक्त वस्तुलाई पिसाबको माध्यमब...
युवापुस्तामा बढेको मदिराको लतले स्वास्थ्यमा यस्तो पार्छ गम्भीर असर
काठमाडौँ । फिजिसियन डा.रवीन्द्र पाण्डेले मदिराको अत्यधिक प्रयोगले कलेजो, आन्द्रा, मिर्गौला, स्नाय...
प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो डायलासिस आज हुने
काठमाडौं । नियमित स्वास्थ्य प्ररिक्षणका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रान्डी इन्ट...
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै हेनुस् आज शुक्रबारको राशीफल
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)लामो धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला बाटोमा दुख हुन...
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै हेनुस् आज बुधबारको राशीफल
गृह मन्त्रालयले गर्यो ६ सय कर्मचारीको माग (विज्ञापनसहित)
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको सुनसरी भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा गजमेर
आज बिहिबारको हेर्नुस् तपाईको राशीफल
१५ श्रीमती भएका राजाको कुमारी युवतीसँग यौनसम्पर्क गर्न बीएमडब्लु कार उपहार
विराटनगरमा वडाअध्यक्षद्वारा आत्महत्या प्रयास
आज मंगलबार हेर्नुस् तपाईको राशीफल
२१ हजार भारु बराबरको प्याज चोरी, सीसीटीभीमा कैद भयो फूटेज
घुस लिएको आरोप लागेका सिडिओलाई निलम्बन गर्न अख्तियारको निर्देशन